အုပ်စုအဖွင့်ကို နိုင်ပွဲနဲ့စတင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ့် ကိုလံဘီယာ၊ ပိုလန်
အုပ်စုအဖွင့်ကို နိုင်ပွဲနဲ့စတင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ့် ကိုလံဘီယာနဲ့ ပိုလန်
19 Jun 2018 . 3:21 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား နောက်ဆုံးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ အုပ်စု(H)က ကိုလံဘီယာ၊ ပိုလန်အသင်းတို့ဟာ ဂျပန်၊ ဆီနီဂေါအသင်းတွေနဲ့ စတင်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး အဖွင့်ပွဲမှာ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ရုရှားအသင်းကတော့ ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ် အီဂျစ်အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် . . .
ကိုလံဘီယာ နှင့် ဂျပန် (၁၉-၆-၂၀၁၈ ညနေ ၆း၃၀)
ဖယ်လ်ကိုအို Falcao ၊ ဘက်ကာ Bacca ၊ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ် James Rodríguez စတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ ပါဝင်နေတဲ့ ကိုလံဘီယာအသင်းဟာ ဒီအုပ်စုမှာ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အသင်းမှာ ဟွန်ဒါ Honda ၊ အိုကာဇာကီ Okazaki ၊ ကာဂါဝါ Kagawa စတဲ့ Quality Players တွေ ပါဝင်နေလို့ လျှော့တွက်လို့တော့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အာရှအသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ သူတို့နဲ့ Power ခြင်း ကွာတဲ့ အသင်းကို ပွဲချိန်ပြည့်ခံကစားနိုင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ကိုလံဘီယာအသင်းပဲ အုပ်စုအဖွင့်ကို နိုင်ပွဲနဲ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပိုလန် နှင့် ဆီနီဂေါ (၁၉-၆-၂၀၁၈ ည ၉း၃၀)
ပိုလန်အသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူး လီဝန်ဒေါစကီး Lewandowski နဲ့ ဆီနီဂေါအသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမား မာနေး Mane တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့မယ်ပွဲပါပဲ။ နှစ်သင်းစလုံးမှာ ပရိသတ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသား ဥရောပအခြေစိုက် ကစားသမားတွေ ပါဝင်နေပြီး ကစားသမားစုဖွဲ့မှုက သိပ်ကွာခြားမှု မရှိပါဘူး။ အာဖရိကအသင်းတွေရဲ့ အနိုင်မခံအရှုံးမပေး Fighting Spirit စိတ်ပြင်းထန်မှုကြောင့် ဆီနီဂေါအသင်း အနိမ့်ဆုံး သရေတစ်မှတ် ရသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရုရှား နှင့် အီဂျစ် (၂၀-၆-၂၀၁၈ နံနက် ၁၂း၃၀)
အုပ်စု(A)ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်ရုရှားအသင်းက ဆော်ဒီကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီး (၃)မှတ် ရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဥရုဂွေးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အီဂျစ်အသင်းကတော့ အမှတ် မရသေးပါဘူး။ အီဂျစ်အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမား ဆာလာ Salah ဒီပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတာကြောင့် အီဂျစ်အသင်း တိုက်စစ်ကစားပုံ ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်။ အမှတ်မရသေးတဲ့အတွက်လည်း အီဂျစ်အသင်း ဖောင်ဖျက်ကစားရမယ့်အနေအထားပါ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ရှင်အသင်းကို သူ့ကွင်း၊ သူ့ပရိသတ်ရှေ့မှာတော့ အနိုင်ရဖို့အထိ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ အီဂျစ် သရေနဲ့ပဲ ကျေနပ်ရဖို့များပါတယ်။
အုပျစုအဖှငျ့ကို နိုငျပှဲနဲ့စတငျနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမယျ့ ကိုလံဘီယာနဲ့ ပိုလနျ
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလား နောကျဆုံးအုပျစုဖွဈတဲ့ အုပျစု(H)က ကိုလံဘီယာ၊ ပိုလနျအသငျးတို့ဟာ ဂပြနျ၊ ဆီနီဂေါအသငျးတှနေဲ့ စတငျယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပွီး အဖှငျ့ပှဲမှာ ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ ရုရှားအသငျးကတော့ ဒုတိယပှဲစဉျအဖွဈ အီဂဈြအသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျရမှာဖွဈပါတယျ . . .
ကိုလံဘီယာ နှငျ့ ဂပြနျ (၁၉-၆-၂၀၁၈ ညနေ ၆း၃၀)
ဖယျလျကိုအို Falcao ၊ ဘကျကာ Bacca ၊ ဂြိမျးဈရိုဒရီဂှကျဇျ James Rodríguez စတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ ပါဝငျနတေဲ့ ကိုလံဘီယာအသငျးဟာ ဒီအုပျစုမှာ နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့အသငျးဖွဈပါတယျ။ ဂပြနျအသငျးမှာ ဟှနျဒါ Honda ၊ အိုကာဇာကီ Okazaki ၊ ကာဂါဝါ Kagawa စတဲ့ Quality Players တှေ ပါဝငျနလေို့ လြှော့တှကျလို့တော့မရပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အာရှအသငျးတဈသငျးအနနေဲ့ သူတို့နဲ့ Power ခွငျး ကှာတဲ့ အသငျးကို ပှဲခြိနျပွညျ့ခံကစားနိုငျဖို့ဆိုတာ ခကျခဲပါတယျ။ ကိုလံဘီယာအသငျးပဲ အုပျစုအဖှငျ့ကို နိုငျပှဲနဲ့ ဖှငျ့လှဈနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ပိုလနျ နှငျ့ ဆီနီဂေါ (၁၉-၆-၂၀၁၈ ည ၉း၃၀)
ပိုလနျအသငျးရဲ့ နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူး လီဝနျဒေါစကီး Lewandowski နဲ့ ဆီနီဂေါအသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမား မာနေး Mane တို့ ထိပျတိုကျတှမေ့ယျပှဲပါပဲ။ နှဈသငျးစလုံးမှာ ပရိသတျနဲ့ရငျးနှီးပွီးသား ဥရောပအခွစေိုကျ ကစားသမားတှေ ပါဝငျနပွေီး ကစားသမားစုဖှဲ့မှုက သိပျကှာခွားမှု မရှိပါဘူး။ အာဖရိကအသငျးတှရေဲ့ အနိုငျမခံအရှုံးမပေး Fighting Spirit စိတျပွငျးထနျမှုကွောငျ့ ဆီနီဂေါအသငျး အနိမျ့ဆုံး သရတေဈမှတျ ရသှားလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။
ရုရှား နှငျ့ အီဂဈြ (၂၀-၆-၂၀၁၈ နံနကျ ၁၂း၃၀)
အုပျစု(A)ရဲ့ ဒုတိယမွောကျပှဲစဉျဖွဈပါတယျ။ အိမျရှငျရုရှားအသငျးက ဆျောဒီကို ဂိုးပွတျအနိုငျယူပွီး (၃)မှတျ ရရှိထားပွီးဖွဈပမေယျ့ ဥရုဂှေးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ အီဂဈြအသငျးကတော့ အမှတျ မရသေးပါဘူး။ အီဂဈြအသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမား ဆာလာ Salah ဒီပှဲမှာ ပါဝငျနိုငျမယျလို့ သတငျးတှထှေကျနတောကွောငျ့ အီဂဈြအသငျး တိုကျစဈကစားပုံ ပိုကောငျးလာနိုငျတယျ။ အမှတျမရသေးတဲ့အတှကျလညျး အီဂဈြအသငျး ဖောငျဖကျြကစားရမယျ့အနအေထားပါ။ ဒါပမေဲ့ အိမျရှငျအသငျးကို သူ့ကှငျး၊ သူ့ပရိသတျရှမှေ့ာတော့ အနိုငျရဖို့အထိ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ထငျတယျ။ အီဂဈြ သရနေဲ့ပဲ ကနြေပျရဖို့မြားပါတယျ။